प्याब्सन–एनप्याब्सनद्वारा पाठ्यक्रममा ‘सिण्डिकेट’ Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौं : निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन र एन प्याब्सनले देशका केही जिल्लामा पाठ्यक्रममा ‘सिण्डिकेट’ लागू गरेको पाइएको छ।
उकेरालाई प्राप्त जानकारी अनुसार तनहुँको प्याब्सन र एनप्याब्सन, चितवनको प्याब्सन, कास्कीको एनप्याब्सन र कञ्चनपुरको प्याब्सन र एनप्याब्सनले पाठ्यक्रममा ‘सिण्डिकेट’ लागू गरेको पाइएको हो।
प्रकाशन गृहबाट मोटो रकम असुल्न यी जिल्लाका प्याब्सन/एनप्याब्सनले पाठ्यक्रममा ‘सिण्डिकेट’ लागू गरेका हुन्।
यी जिल्लाका प्याब्सन समितिले आफूसँग आबद्ध निजी विद्यालयले पुस्तक प्रयोग गरेबापत सम्बन्धित प्रकाशन गृहले निश्चित रकम दिनुपर्ने नियम बनाएको स्रोतले जनाएको छ।
प्याब्सनले केन्द्रको भवन निर्माणका लागि यस्तो नियम बनाएको सूचना उकेरालाई प्राप्त भएको छ।
एनप्याब्सन कास्कीले पनि आफूसँग आवद्ध निजी विद्यालयलाई आफूले तोकेकै पुस्तक किन्न निर्देशन दिएको छ। उसले परीक्षा आफैले लिने भन्दै तोकिएकै पुस्तक किन्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
उक्त निर्देशन नमान्ने विद्यालयबाट आवश्यक रकम उठाइने कास्की एनप्याब्सनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुभएको रहेछ नि ?
उकेराको जिज्ञासामा एनप्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एउटै पाठ्यक्रमको प्रयोग गरिएको दाबी गरे।
‘हामीले पाठ्यक्रम बनाउँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति अनुसार विज्ञको टोली बनाएर पाठ्यक्रम बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाभर नै एउटै पाठ्यक्रम पढाउँदा मूल्यांकनमा सहज हुन्छ भनेर गरेका हौं। हामीले धम्की दिएका हैनौं, आग्रह गरेका हौं।’
यी जिल्लाका प्याब्सन÷एन प्याब्सन र तिनका क्लस्टरले नयाँ शैक्षिक सत्रअगावै विद्यालयले पढाउनुपर्ने पुस्तकको सूची तयार पारेको उकेरालाई सूचना प्राप्त भएको छ।
कास्की एनप्याब्सनमाथि प्रकाशन गृहसँग एक हप्तासम्म मोलमोलाई गरेर पुस्तक सूची तयार पारिएको आरोप छ।
‘कास्की एनप्याब्सनले त प्रकाशकलाई बोलाएर प्रत्येक विषयको अधिकतम कति रकम दिने भन्दै बार्गेनिङ गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो।
कास्की एनप्याब्सनको पुस्तक सूची तयार पार्नका लागि लेनदेन गर्न रामबहादुर मोचीले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ।
मोचीले भने यो आरोप निराधार भएको बताए।
‘यस्ता आरोप लगाउने नेपालमा समूह नै छ की जस्तो लाग्छ,’ मोचीले भने, ‘एनप्याब्सनसँग आबद्ध विद्यालयमा हामीले एउटै पाठ्यक्रम लागू गरेको साँचो हो, तर प्रकाशकसँग पैसा उठाउने गरेको कुरा झुठो हो।’
शिक्षा विकास समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख नारायण सुवेदीलाई एनप्याबसनले पाठ्यक्रममा सिण्डिकेट लगाएको बारे जिज्ञासा राख्दा अनभिज्ञता प्रकट गरे।
सुवेदीले भने, ‘अहिलेसम्म अभिभावकले हामीलाई उजुरी गर्नु भएको छैन। विद्यार्थीबाट पनि गुनासो आएको छैन। तपाईंले भन्नुभयो के रहेछ अब बुझ्छु।’
यता एनप्याबसनका केन्द्रीय अध्यक्ष भने पाठ्यक्रम लागू गर्दा सिण्डिकेट लागू नगरिएको दाबी गर्छन्।
‘८/१० विद्यालय मिलेर एउटै पाठ्यपुस्तक पढाउने भन्दा यसैलाई सिण्डिकेट लागू भयो भन्नुको अर्थ देख्दिनँ,’ सापकोटाले भने, ‘कतै विद्यार्थी थोरै भएर अथवा गुणस्तरको लागि एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरेका छन्। यसलाई गलत भन्नु भएन। कमिसन माग्ने काम एनप्याब्सनले गरेको छैन।’
त्यस्तै, प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव कुमार घिमिरे भने कुनै प्रकाशन गृहले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा बाहेक प्याब्सनले प्रकाशन गृहसँग कमीसन नमागेको दाबी गर्छन्।
‘प्रकाशन गृहसँग प्याब्सनले पैसा मागेको छैन। स्वीकृत प्राप्त प्रकाशन गृहसँग मात्रै हामीले पुस्तक छपाइ गरेर लागू गरेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘कोही प्रकाशन गृहले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा कुनै कुनै जिल्लामा सहयोग भएको होला। हामीले कही कतै कमिसन मागेका छैनौं।’
‘स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्छ’
प्रवक्ता, पाठ्यविकास केन्द्र
हामीले कुन कुन प्रकाशन गृहको पुस्तक लिने भनेर सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेका छौं। शिक्षा ऐनको दफा ८ अनुसार नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको पुस्तक मात्र लागू गर्न पाउने भनेका छौं।
त्यस्तै, निजीको हकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत दिएको हुनुपर्छ। त्यस्तो हरेक पुस्तकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लेटरहेडमा लेखिएको पत्र हुन्छ। अन्य पाठ्यपुस्तक पनि पढाउन चाहनेले शिक्षा नियमावलीको नियम ३५ अनुसार शिक्षा इकाई प्रमुख अथवा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा अनुसार स्वीकृति लिएर पढाउन समेत गर्नुपर्छ।
पाठ्यक्रम लागू गर्दा जोर जबरजस्ती कसैले गर्न हुँदैन। अभिभावकलाई मर्का परेको र बढी मूल्य तिर्नुपरेको हो भने उजुरी गर्नुपर्छ। पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले अनुगमन गर्नुपर्छ। अभिभावकले उजुरी नै गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत कारबाही गर्न सक्छन्।
त्रिविको गत वर्ष भदौमा हुनुपर्ने स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा कोभिड-१९ का कारणले हुन सकेको छैन। पनिकाले स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा आगामी ४ साउन र....